AMBATOVY SY NY KOLONTSAINA : Nanolotra sisam-bakoka arkeôlôjika ho an’ny Mozea Vavitiana
Ny alakamisy 22 oktobra lasa teo, nanolotra sisam-bakoka maherin’ny 1 800 hita tao amin’ny faritry ny toeram-pitrandrahany, miampy boky firaiketana (catalogues) roa sy sarintany efatra mirakitra ireo asa fikarohana arkeôlôjika natao tao amin’ny toeram-pitrandrahana sy ny manodidina azy, ho an’ny mozea vaovaon’ny Faritanin’i Toamasina, ao Ampasimazava, izay nomena anarana « Mozea Vavitiana » ny orinasa Ambatovy. 28 octobre 2020
Asa tanimanga teo an-toerana toy ny vilany, sinibe tany, tavoara, lovia
jobo, tavy tanimanga, sns no mandrafitra ireto sisam-bakoka ireto, ary vakim-pitaratra, efa tany ho any amin’ny taon-jato faha-18 ka hatramin’ny faha-20 tany, araka ny daty tombana nomen’ireo manam-pahaizana manokana momba ny arkeôlôjia avy ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo. Izao tolotra izao dia tafiditra indrindra amin’ny laminasa fitandroana ny arkeôlôjia ampiharin’ Ambatovy, araka ny teny nomeny mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana, izay tanterahiny amin’ny alalan’ny Drafitra fitantanana ny tontolo iainana sy ny fandrosoana sôsialy (PGEDS) sy ny Drafitra fitantanana manokana ny tontolo iainana (PGES), voarakitra ao anatin’ny bokin’andraikitra.
Nanaja ny fomba amam-panao eo an-toerana sy ny fomba fiasa siantifika ary ny fenitry ny SFI ny asa rehetra fiarovana ny lovan-kolontsaina. Nanatrika ny fanolorana ireo sisam-bakoka ireo ny Talen’ny Kabinetra ao amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina Haja Rasoanarivo ; ny Tale Jeneralin’ny Tranombokim-pirenen’i Madagasikara Andrianjaka Raonison ; ny Tale Jeneralin’ny Ofisim- pirenena misahana ny zavakanto sy ny Kolontsaina Niry Rakotondrabe ; ny Talem- paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Atsinanana Aniella Vololoniaina ; ny Talen’ny Foibe misahana ny Harem-bakoka Ramatoa Tina Lalaina Razafimanantsoa.
Manome lanja ny lovan-kolontsaina malagasy
Tsara ny mampahatsiahy fa ny taona 2014 Ambatovy dia efa nandray anjara tamin’ny fametrahana ny « Centre D’Interprétation du Patrimoine (CIP) » ao Toamasina, Ambatovy. Natao indrindra izany mba hiarovana sy hampirantiana amin’ny daholobe ireo zavatra nilevina arkeôlôjika (artefacts) hita tao amin’ny faritra iasan’Ambatovy eo anelanelan’i Moramanga sy Toamasina.
Ireo sisam-bakoka arkeôlôjika, izay ampahany tsy afa-misaraka amin’ny tantaran’ny kolontsain’ny Faritra Atsinanan’i Madagasikara, dia hahafahan’ny mpianatra sy ny mpikaroka siantifika mamantatra bebe kokoa ny lasa, mahazo ny ankehitriny sy manorina ny ho avin’ny Faritra. Izany dia hanampy amin’ny fampandrosoana ny maha-izy azy ny kolontsaina malagasy sy ny fandrosoan’ny toekarem-pirenena.
Manome lanja manokana ny fitandroana sy ny fanandratana ny lovan-kolontsaina malagasy Ambatovy ary namiily mihitsy aza ny lalan’ny Fantsomby (Pipeline) nandritra ny dingana fanorenana mba tsy hanombinana ireo toerana manan-danja ara-kolontsaina.
“Tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe” FIKASANA HANONGAM-PANJAKANA, FANAKORONTANA … (473) 14 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (159) 13 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (121) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (102) 13 janvier 2021 Nakorain’ireo mpijery ny Ben’ny tanànan’Antsiranana FANDRAVANA LALAO (76) 19 janvier 2021 Milaza hanova paikady amin’ny fanakorontanana ny firenena RODOBEN’NY MPANOHITRA (71) 14 janvier 2021